အသေးစားဆန်စက်များသည်ဆန်စက်အသေးစားအတွက်အထွက်နှုန်းနှင့်အမြတ်အစွန်းပိုမိုရရှိရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းသစ်သောဆန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များသည်တွင်းထွက်အမှိုက်များကိုလျော့နည်းစေသည်, လူအင်အားလိုအပ်ချက်နှင့်အစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးစံချိန်စံညွှန်းများထိန်းသိမ်းရန်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအဆင့်မှထုတ်လုပ်မှုအဆင့်အထိစိတ်ကြိုက်စီမံထားသောဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်, အနည်းဆုံးအဆင့်မှာကုန်ကျစရိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, အချိန်မီပေးပို့ခြင်းအာမခံ.
ကျနော်တို့ဒီဇိုင်း, သန့်ရှင်းရေးအပါအ ၀ င်အသေးစားဆန်စက်စက်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ပြီးထောက်ပံ့ပေးသည်, စိုင်းထီးဆိုင်, အဖြူရောင်, ပိုလန်, ငယ်ငယ်ကတည်းက, ဆန်ပြုပြင်ခြင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် sorting နှင့်ထုပ်ပိုးစက်. ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစားဆန်စက်သည်ဆန်စက်များအားကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်နှင့်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ကူညီသည်. အဆိုပါခေတ်မီကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ, အမြန်ပေးပို့ခြင်းနှင့်အလွန်ကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းကဆန်စက်ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်.
ဒီ mini mini ကြိတ်စက်အသစ်စက်စက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် အသေးစားဆန်စက်, မိသားစုတိုင်းကျန်းမာသန်စွမ်းသောဆန်ကိုစားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. အတော်လေး သေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ် ဒါကြောင့်တစ်နေရာမှအခြားသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်လွယ်ကူပြီး ခရီးဆောင်. အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာဆန်စက်သည်ဖောက်သည်များအိမ်တွင်အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေစေရန်ဖြစ်သည်, အော်တိုပစ်ခတ်မှု function ကိုအတူ, အိမ်သုံးဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်.၎င်းကိုပါဝါနှင့် ချိတ်ဆက်၍ သူအလုပ်လုပ်မည့်ခလုတ်ကိုသာနှိပ်ပါ. ဒါကြောင့်အဲဒါကိုဘယ်လိုလည်ပတ်ရလဲဆိုတာသင်တွေ့နိုင်တယ်. အပြင်, ဒီစက်က Multi-functional ဖြစ်စေတယ်.
၎င်းကိုသင်အညိုရောင်ဆန်နှင့်ဆန်ဖြူရရန်အသုံးပြုနိုင်သည်. ဒီတော့ဒါ ခေတ်မီဆန်စက်အသေးစား ယခုလူကြိုက်များသည်, အထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွေမှာ, ကနေဒါ, ထိုင်းနိုင်ငံ, စင်္ကာပူ, တရုတ်, နိုင်ဂျီးရီးယားစသည်တို့
1. စက်၏ဗို့အားသည် single phase လျှပ်စစ်ဖြစ်သည်. ကျေးဇူးပြု၍ မသုံးမီအတည်ပြုပါ.
2. သငျသညျသေးငယ်တဲ့ဆန်စက်စက်ကိုအသုံးမပြုမီ, တိုင်း plug ကိုဆန်းစစ်ပါ, ဆက်သွယ်မှုလျှပ်စစ်လိုင်း.
3. အသေးစားဆန်စက်ကိုအပူချိန်မြင့်စွာလည်ပတ်ခွင့်မပြုပါနှင့်, 40 below အောက်ကစက်ပတ်ပတ်လည်အပူချိန်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်.
4. အသေးစားဆန်စက်စက်မှထုတ်လုပ်သောစပါးသို့မဟုတ်ဆန်သည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအဆင့်အတန်းနှင့်ကိုက်ညီရမည်. ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးပစ်ချပါ, ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့ကျောက်ကဲ့သို့, စက်ပျက်စီးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သံ.
5. စက်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း, ဒါကြောင့်ပိုပြီးဝန်သို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ထားလျှင်, ကျေးဇူးပြုပြီးဆန်ကြိတ်ခွဲစက်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုဖြတ်ပြီးသန့်ရှင်းပါ, ပြီးရင်ထပ်လုပ်လိုက်ပါ.
6. အလုပ်လုပ်စဉ်, bran သည် bran box ၏သုံးပုံနှစ်ပုံနှင့်ပြည့်နေလျှင်, ကျေးဇူးပြုပြီးအချိန်မှန်သန့်ရှင်းပေးပါ.
7. သေးငယ်တဲ့ဆန်စက်စက်လုပ်ရင်, ကျေးဇူးပြု၍ ဖယ်မပေးပါနဲ့.
8. ဆန်စက်အသေးစားမတိုင်မီလုံးဝအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ, ကျေးဇူးပြုပြီးအဲဒါကိုသန့်ရှင်းအောင်မထိန်းသိမ်းပါနဲ့.
9. အသေးစားဆန်စက်ပြီးနောက်ဆန်ကိုကြိတ်သည်, မိနစ်အနည်းငယ်လိုအပ်သည်, အားလုံးဆန်ထွက်လာလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်စက်ကိုပိတ်နိုင်သည်.